Ogaden News Agency (ONA) – Guddiga Qaxootiga Ogadenya oo Kulan Muhiim ah la Yeeshay Wafti ka Socda Haya’adda UNHCR
Guddiga Qaxootiga Ogadenya oo Kulan Muhiim ah la Yeeshay Wafti ka Socda Haya’adda UNHCR
Posted by ONA Admin	/ September 11, 2014
Gudiga Qoxootiga Ogadenia ee magacooda loosoo gaabiyo O.R.C.C ayaa maalintii Arbacada ee ay taariikhdu kubeegnayd 10/9/14 shir muhiim ah kaga qayb galay xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab.
Shirkan oo ahaa mid mudaba lasugayay ayay gudigu kula kulmeen haweenayda ugu saraysa qaybta Protection-ka ee hay’ada UNHCR gudiga Qoxootiga oo kakala socda xeryaha kajira deegaanada Faafi iyo Dhadhaab ayaa ugu horaynba kawarbixiyay dhibaatooyinka ay qoxootiga ree Ogadenia lanoolyihiin iyo guud ahaan sababaha kasoo qixiyay wadankoodii ay aadka ujeclaayeen.
Sidoo kale gudiga ayaa soobandhigay cadaymo kusaaabsan dhibaatooyinka loogu gaystay gudaha Ogadenia iyo dibadaba waxayna siqoto dheer uga warameen sababta keentay in ay dhibaatooyinkaas soogaadhaan. Sidoo kale gudiga ayaa kasheekeeyay in qayba badan oo dhibaatooyinkan kamid ah lagu gaadhsiiyay wadamada Ogadenia dariska la ah sida Somalia, Jabuti iyo Kenya, dhibaatooyinkaa oo ay gudigu kusheegeen in ay isugu jirtay Dil iyo Afduub loogaystay muwaadiniin ree Ogadenia ah oo horaanba uga soo qaxay dhibaatooyin ay xukuumada Itoobiya iyo ciidankooda ay u carbiyeen gumaadka shacabka birimagaydada ah ee ree Ogadenia.
Gudiga ayaa haweenayda qaybta Protection ka ugu wayn uqeexay juquraafi ahaa meesha uu wadanka Ogadenia kaga yaalo Geeska Afrika iyagoo gacanta kagaliyay qariirada muujinaysa goobta uu dunida kagayaalo wadanka Ogadenia iyadoo xustay in ay taqaano wadankaas taariikh ahaan laakiin aysan wali arag wax badan oo xog ahna ay kahayso. Gudiga ayaa ayaa haweenaydan gacanta kagaliyay qoraalo ay wargaysyo caan ah ka qoreen xaalada Ogadenia sida wargayska caanka ah ee Daily Nation oo kasoo baxa wadanka Kenya oo waxbadan todobaadkan kaqoray ogadenia. Waxayna gudiga Ogaden Refugee Community Commitee ka cadsadeen mas’uulkan in aysan hay’ada qoxootiga Aduunku dhayalsanin qaylo dhaantooda.
Guntii iyo gaba gabadii gabadhii kasocotay hay’ada ayaa ayaa dhankeeda balan qaaday in ay wax badan kaqaban doonto shacabka qoxootiga ah ee dhibaatada doolka ah loogu gaysanayo wadamada ay kusoo qaxeen waxayna sheegtay in ay dhibaatadan gaadhsiin doonto meelkasta oo ku haboon.